अभियानका प्रधानसम्पादक भण्डारीलाई बद्नाम गराउन षड्यन्त्र ! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » सूचना प्रविधी → अभियानका प्रधानसम्पादक भण्डारीलाई बद्नाम गराउन षड्यन्त्र !
अभियानका प्रधानसम्पादक भण्डारीलाई बद्नाम गराउन षड्यन्त्र !
April 8, 2016३०० पटक
काठमाडौं । न्युज अभियान डटकम र अभियान टाइम्स साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक छायाचन्द्र भण्डारीलाई एउटा समूहले बदनाम गर्ने प्रयास गरेको छ । सो समूहले फेसवुकमा एक समुहले पेज सुरु गरि बदनाम गर्ने प्रयास गरेको हो ।
पेजमा भण्डारीको फोटो इन्साइडमा राखेर ‘पत्रकारीताको आडमा गुण्डागर्दी व्ल्याकमेल गर्ने दलाल हुन’ लेखेर पोष्ट गरिएको छ । सो पोष्ट गर्ने फोटो फ्रान्सिस ग्यालेक्सी नोट इड्ज लेखेको देखिन्छ ।
त्यसैले यो पेज अमेरिकाको फ्रान्सिस्कोमा निर्माण गरी भण्डारीको बदनाम गर्ने काम त्यहीबाट गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानसम्पादक भण्डारीले आफुमाथि बदनाम गर्नेमाथि साइवर क्राइम अन्र्तगत उजुरी दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
उनले काठमाडौंको अपराध अनुसन्धान महाशाखामा मौखिक जानकारी दिइसकेको र लिखित उजुरी दिने तयारीमा रहेको बताए । किश्चियन धर्मको आडमा लुट मच्चाउदै आउनेहरुको कर्तुतहरु नियमितहरुमा प्रकाशित गर्दै आएका भण्डारीलाई सोहि समुहका केहि ब्यक्तीले बदनाम गराउने उदेश्यले सामाजिक सन्जालमा आफ्नो नाम र तस्बिर दुरुपयोग गरेकोमा कानुनी उपचार खोज्ने समेत बताए ।
तस्बिर र नाम अपलोड गरेर गुण्डागर्दी व्ल्याकमेल गर्ने दलाल भएको बताउने सो समुहलाई प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती समेत दिन्छु उनले भने ।